Gunnedah olona mandresy NSW harena ankibon'ny tany Young Achiever Award - China JP Metal & Equipment
Ny Murray Gunnedah O'Keefe dia "chuffed" taorian'ny voafidy handray ny harena ankibon'ny tany Young NSW Achiever Award.
Ny Gunnedah Shire mpanolotsaina sy Whitehaven Coal mpiasa nambara ho toy ny mpandresy tao amin'ny NSW harena ankibon'ny tany sy ny Indostria Suppliers 'Awards amin'ny Parlemanta NSW House tamin'ny fiandohan'ity volana ity.
Iray amin'ireo finalists roa ao amin'ny sokajy Achiever Young, ilay 29 taona, nilaza fa fantany fa nihazona izany andraikitra izany no atolotry ny Whitehaven nefa tsy manantena ho lasa finalist aoka ihany ho mpandresy.
"Ny orinasa mpitrandraka nampiasa be dia be ny olona izay manao zavatra mahafinaritra sy tsara tarehy aho chuffed hatao atolotry," hoy izy.
"Ny fanendrena dobo dia tena be dia be."
The Young Achiever loka Manaiky ny tanora matihanina panahy taona 18-35, izay nanorina ny asa mahomby eo amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany.
Murray nilaza fa faly handray ny dingana mba hanaiky ny mari-pankasitrahana.
"Tena be fanekena sy tena voninahitra ho nifidy ny avy amin'ny orinasa lehibe toy izany hamely orinasa matihanina avy amin'ny fiaviana isan-karazany," hoy izy.
Murray dia harena ankibon'ny tany ao amin'ny Maules mpitantana Creek fa nanomboka avy toy ny misokatra voapaika mpandinika. Lehibe tao Muswellbrook sy Aberdeen ary nifindra tany Gunnedah tamin'ny 2014 mba hiasa amin'ny Whitehaven.
"Mihoatra noho ny zavatra be dia be izany dia midika fa ny ekipa ao amin'ny Maules Creek te hanendry ahy ho ny mari-pankasitrahana. Fa ny asa Sarobidy ampy mitaky ny fanekena fa ny fanendrena ihany no nanome, "hoy izy.
Murray nilaza fa nahazo fanohanana avy amin'ny tsy ny ekipa ao amin'ny Maules Creek, fa koa ny "tapany tsara kokoa", Sairz.
"Hoy aho hoe, toy ny alina, tsy misy ny hery, na mifantoka mankany amin'ny fiainana na inona na inona ho azo atao raha tsy misy ny fitiavana sy fanohanana ny Sairz," hoy izy.
Murray hoy manodidina ny 450 no nanatrika ny loka sakafo hariva, anisan'izany ny MP toy ny Member for Tamworth Kevin Anderson.
Ary ny glitz ny hariva efa matromatroka, Murray nilaza fa "raharaham-barotra toy ny mahazatra".
"Tena mahafinaritra Pat ao ambadika sy ny faneva izay aho teo amin'ny ankavanana lalana," hoy izy.
Coal Whitehaven lehiben'ny mpanatanteraka mpiandraikitra sy ny tale mpitantana, Paul Flynn, hoy Murray dia ho niarahaba noho ny zava-bitany.